Nhau dzakanaka dzevaridzi veApple Watch: SiriKit iri munzira | IPhone nhau
Nhau dzakanaka dzevaridzi veApple Watch: SiriKit iri munzira
Pablo Aparicio | | Apple Watch, Siri
Vaya vane Apple Watch vanogona kushamisika nemusoro wenyaya iyi, nekuti tinogona kukumbira Siri paApple Watch nemurairo "Hei, Siri" kana nekutsikirira nekubata Dhijitari Crown. Asi izvo zvatingaite neApple Watch uye Siri haina chekuita nazvo Sirikit, Apple's SDK iyo, pakati pezvimwe zvinhu, inotibvumidza kudzora chechitatu-bato kunyorera kubva kune chairo apuro mubatsiri.
Tsananguro inokurumidza yezviri SiriKit ndeyekutaura izvo zvinotora kutumira WhatsApp uchibvunza Siri, kana kutanga Runtastic kudzidziswa kubva kurinda pasina kutanga application manyore. Sezvauri kuona, chichava chakakosha kugadzirisa icho Apple yatovepo Yakazivisa izvo zvinosvika padhuze nekutanga kwe WatchOS 3.2, mune zvese mukana weiyo inotevera vhezheni yeApple's smartwatch inoshanda sisitimu.
SiriKit ichatibvumidza isu kubata chechitatu-bato kunyorera nezwi kubva kuApple Watch
WatchOS 3.2 haisati yavapo kana kune vanogadzira kuti vayedze, asi Apple yakatozivisa zvichauya neshanduro iyi, se Theater maitiro o Cinema Mode yataive tichitaura nezvayo maawa mashoma apfuura. Chaizvoizvo mune iyi ruzivo isu tinogona zvakare kuverenga zvinotevera:
watchOS 3.2 inosanganisira SiriKit. Vashandisi vanogona kubvunza Siri kubva kuApple Watch yavo kunyorera kukwira, kutumira meseji, kubhadhara, kana kuita zvimwe zvikumbiro izvo yako app inogona kubata.
Zvishandiso zvinopa masevhisi mune akasarudzika madomeni anogona kushandisa SiriKit kuita kuti iwo masevhisi awanikwe kuburikidza neSiri pane watchOS. Kuita kuti masevhisi ako avepo zvinoda kugadzira imwe kana akawanda ekuwedzera ekushandisa anoshandisa iyo Intents uye Intents UI masystem. SiriKit pane watchOS inotsigira masevhisi munzvimbo dzinotevera.
Kuti udzidze kuwedzera SiriKit rutsigiro uye kupa vashandisi nzira nyowani dzekuwana masevhisi ako, verenga iyo SiriKit Programming Nongedzo.
Kana ndisingakanganise, runyorwa rwemhando yemapurogiramu anogona kushandisa SiriKit pawatchOS ndiyo irwo runyorwa rwemhando yemapurogiramu anogona kushandisa iyo imwechete SDK paIOS izvozvi, saka Tinogona kubvunza zvakafanana kune iyo Siri vhezheni yeApple Watch sekune iyo iPhone kana iPad. Izvo zviri pachena ndezvekuti watchOS 3.2 ichave yekuvandudza kukuru iyo ichaona mwenje wezuva mukupera kwaKurume kana kutanga kwaApril. Zvichava zvakakodzera kumirira here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nhau dzakanaka dzevaridzi veApple Watch: SiriKit iri munzira
Apple Pay yakakura 50% gore rapfuura, sekureva kweTNN analytics mushumo
Yese nhau ichaunzwa neIOS 10.3